> Resource> Naghachi> Olee otú iji Igosi Canon CRW Photo Recovery
Olee Otú M Pụrụ Naghachi CRW Photos si My Canon igwefoto?
Ụnyaahụ mgbe m dị ihe jikọọ m Canon igwefoto na kọmputa, na kọmputa na mberede mechie. Mgbe ahụ, m restarted kọmputa m na-ahụ ihe ọ bụla na na SD kaadị. M nwere ọtụtụ CRW photos na m Canon igwefoto. Nwere ike onye ọ bụla-enyere m aka naghachi ndị CRW foto?
Ọ bụrụ na ị na-eji gị Canon igwefoto ebe unu CRW photos furu, ị ka pụrụ ịrụ CRW mgbake iji a-atọ ndị ọzọ foto mgbake usoro. Wondershare Photo Recovery (Dakọtara na Windows 8/7 / Vista / XP) na Wondershare Photo Recovery for Mac bụ ezi mmasi n'ihi na ị na-agbake CRW foto ndị si Canon igwefoto. Ọ bụ pụrụ ịdabere na mfe na-eji CRW foto mgbake software na ị dị nnọọ mkpa ka iṅomi gị Canon igwefoto ma ọ bụ nchekwa kaadị.
Download ikpe mbipute nke Wondershare Photo Recovery na ị pụrụ iṅomi gị igwefoto ma ọ bụ nchekwa kaadị ike iṅomi gị furu efu CRW photos.
Nzọụkwụ na-agbake Lost ma ọ bụ ehichapụ CRW Photos
Nke a CRW foto mgbake ndu e dere forWindows version nke Wondershare Photo Recovery. Ọ bụrụ na ị bụ onye na Mac njirimara, ị nwere ike ibudata Mac version.
Tupu agbake CRW photos, biko eme ka n'aka gị Canon igwefoto ma ọ bụ sd kaadị na-ọma ejikọrọ na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 1 Mgbe launching usoro ihe omume na pịa "Malite" ke Malite interface, niile partitions na mpụga nchekwa ngwaọrụ ga-edepụtara site a usoro. Ị dị nnọọ mkpa iji họrọ mbanye akwụkwọ ozi gị Canon igwefoto wee pịa "iṅomi" na-amalite mgbake.
Nzọụkwụ 2 Mgbe iṅomi risịrị, niile hụrụ CRW photos ga-egosipụta na mbụ aha, ị nwere ike ihuchalu ha n'ihu mgbake. I nwekwara ike ịchọ ha site faịlụ aha.
Nzọụkwụ 3 Họrọ Raw faịlụ i chọrọ mgbake na mgbe ahụ, ị nwere ike pịa "Naghachi" zọpụta ha ka ha Obodo nchekwa na kọmputa gị ma ọ bụ ndị ọzọ na nchekwa ngwaọrụ.
Cheta na: Biko adịghị echekwa natara CRW photos azụ gị Canon igwefoto ma ọ bụ SD kaadị nke ya n'oge mgbake usoro. Ma i nwere ike na-naghachi ha.
Banyere Wondershare Data Recovery:
Wondershare Data Recovery Bụ a data mgbake omume na-enyere gị iji weghachite photos, audios na vidiyo site na kọmputa, igwefoto na nchekwa ngwaọrụ na ala. Na ya, i nwere ike ihuchalu hụrụ faịlụ n'ihu mgbake.
Olee otú Naghachi ehichapụ Photos si Blackberry Playbook
Olee otú Naghachi Registry Igbochi Windows si Malite
Ụzọ abụọ iji naghachi PowerPoint Files Mfe